Wedding kwi-Sweden - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ngamnye isizwe kwaye ilizwe ngalinye sele eyakhe wedding imicimbi yayoOku akukho ezahlukeneyo kwaye Sweden, ingakumbi yintoni lizwe lethu kunye yayo eyodwa imbali nenkcubeko. Wedding kwi-Sweden rhoqo ingaba i-american imodeli ka-wedding eyodwa: ngokubanzi, bazalwana abathandekayo kuqala watshata Ebandleni, kwaye kuphela ngoko yiya urhulumente womtshato. Kukho i umdla tradition: lokuqala omnye emnqamlezweni i umda Webandla (itempile) iya kuba intloko yendlu (apho groom ngu-xa kuqaliswayo ilinde bride e kwesibingelelo, njalo ebonisa ukuba intloko usapho kuba oko). Kwi-umqondiso ye-ekuthetheni i-groom inika bride lokuqala umsesane. Ngomhla wedding eyodwa kufuneka ezahlukeneyo, yesibini umsesane.
I-groom kufuneka banike bride omnye wedding umsesane
Lwesithathu umsesane iya kuba awarded ukuba inkosikazi kuphela emva kokuzalwa zabo umntwana wokuqala. Oko kukholisa ukuba kwenzeka ntoni yokugqibela umsesane enikwe kude phambi wedding. Ufuna ukwamkela yokuba Sweden, ekubeni ngeli xesha, ebizwa-inkululeko ubudlelwane phakathi kwaye ubukho be zasekuhlaleni marriages (ngokuba Samba) isamkele cohabitation (okanye nkqu okunokukhethwa kuko) njengoko a real umtshato, ngothando, abantwana. Ufuna ukuthetha malunga umtshato, ngokuba Samba. Ngu imodeli ka-khangela ubudlelwane phakathi, esibizwa yamkelwa kwi isemthethweni inqanaba kwaye society. Yena sele ethile ubhaliso umgaqo-nkqubo, xa kwanele ukuthi ukuba ungummi ezimbalwa. Kanjalo, kukho iimeko ukuba uyakwazi kuba ezimbalwa kodwa hayi kuhlala kunye. Phambi wedding, isiswedish girls rhoqo ukuqokelela a bachelorette iqela apho bride kwabelwa, kwaye yayo ingqina. Xa ndafumanisa ezi-sat apho lamiswa yi-ezikhokelela elonyuliweyo, inkampani yakhe abahlobo. Mna ke bemangalisiwe oko kwaba kokuya kwi kwaye ndicela wonke inkampani Jikelele. Ekuqaleni ndandicinga zinikezelwe a ingqinqwa stencils apho abahlobo, relatives, nabo kwaye ngoku ingaba komhlaba njani ndishiya wam inqwenelela elizayo ibe ngumfazi. Mna wished zonke eyona ndlela ingcono kwi-Swedish kwaye kwi-Swedish. Kubalulekile kukunceda kakhulu noting ukuba girls bonke baba iselwa, ozolisayo, ngaphandle lwezempilo. Baba ehleli kwi-Park, ukuphakanyiswa zithungelana kwaye yintoni i-avokhado, strawberries. I-portal ufumana i Window Sweden - yonke imibuzo: xa kukotshwa mathiriyali ukusuka zethu site nceda ufake ikhonkco emva umthombo.
Танысу сайтын Италия - тегін танысу қызметі Италиядағы Видео-танысу
esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela free akukho ubhaliso ividiyo ukuncokola nge-girls ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko ezinzima Dating friendship-intanethi Chatroulette ubudala Dating guys ividiyo esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela-intanethi ngaphandle ubhaliso mobile Dating Chatroulette ubhaliso iinketho